Tao anatin'ny iray taona sy tapany na roa taona, ny Governemanta Malezia dia nandinika manokana ny fampivelarana sehatry ny toekarena, toy ny fizahan-tany. Ny kalitaon'ny serivisy, ny fanatanjahantena voajanahary voa-Janahary no mahatonga ny sisa any Malezia mahaliana sy mahafinaritra.
Ankoatr'izay, Malezia tsy nanitatra loatra ny fialan-tsasatra mahafinaritra teny an-dranomasina. Ary afaka mitsahatra eto ianao mandritra ny taona, ary ny toetr'andro eto dia tsara foana. Saingy raha mandeha amin'ny fialan-tsasatra amin'ny ankizy na ny tadiavinao ianao, raha any Malezia, mba handrafetana programa mahaliana iray, dia mendrika ny mijery ny zava-drehetra mialoha mba hialana amin'ny avo indrindra.
Sarobidy sa mora?
Ny fanontaniana fototra, izay mahaliana ny ankamaroan'ireo vahiny any amin'ny firenena - lafo ny miala sasatra any Malezia. Raha mandinika ny vidin'ny sakafo sy ny trano fandraisam-bahiny ianao, dia ho kely kokoa noho ny any Thailand izany. Na izany aza, ny avoakan'ny serivisy eto dia ambony kokoa. Ny fialan-tsasatra any Malezia amin'ny volana Desambra, na ny faharoa amin'ny tapany faharoa, dia handany mihoatra noho ny amin'ny fotoana hafa: tariby ny krizy mihoatra noho ny mahazatra.
Ny fandriam-pahalemana any Malezia dia mora kokoa noho ny mividy fitsangatsanganana. Na izany aza, tsy hisy olana amin'ny fihenan-tsakafo sy ny fihinanana ary ny fisainana. Ankoatr'izay, ny mpifankatia dia mampifandray "mahafinaritra mahasoa", izany hoe miala sasatra, manamarika fa any Malezia ianao dia afaka mividy zavatra tsara kokoa noho i Thailand.
Ireo zoro any Malezia
Voalohany indrindra, mamaritra ny toerana handehananay any Malezia izahay mba hialan-tsasatra, izay toerana tsara kokoa ny moron-dranomasina, ary aiza ny trano fandraisam-bahiny , aiza ny mandany fotoana miaraka amin'ny mpankafy mpihinana , ary aiza ho an'ireo mpanarato. Ny fialàn'i Malezia amin'ny sary dia mametraka tsara ho an'ny faritra rehetra ao amin'ny firenena, ary ahoana ny tena izy?
Araka ny nolazain'ireo vahiny maro eto amin'ny firenena, Penang sy Langkawi dia anisan'ireo nosy Malezia, izay tsara indrindra hialana sasatra. Azonao atao ny miala sasatra any amin'ny hotely tsara misy serivisy, ary mandry amin'ny fasika. Eto no misy ireo toeram-ponenana ao Malezia, izay tsara kokoa ny miala sasatra ary aiza no tianao haverina:
The lagoon manga. Ny vakansy tsara indrindra any Malezia dia eo amoron-dranomasina miaraka amin'io anarana io. Tena mampientam-po ny tontolo iainana, ary tena avo lenta ny hotely. Raha toa ianao ka saro-kenatra ny fotoana laninao, dia afaka mandeha mandeha anaty rano ianao, mandehandeha na mitsambikina rivotra amin'ny rivotra.
Tioman . Ny sasany amin'ireo tora-pasika tsara indrindra any Malezia dia eo amoron-dranomasin'io nosy io. Ity toerana ity dia tafiditra ao anatin'ny lisitr'ireo tsara indrindra eto an-tany. Tsy mahagaga raha heverina ho anisan'ny tsara indrindra koa ny toeram-ponenana ao an-toerana. Ny endrik'ity moron-dranomasina ity dia ny manodidina miaraka amin'ny antsantsa tigra, noho izany dia ny "peper" ihany koa ny hatsaran'ny toerana misy azy.
Pangkor . Ny tora-pasik'ity nosy ity dia tafiditra ao amin'ny fanombatombana ny tsara indrindra. Ity no faritra andrefan'ny firenena, izay misy ny Emerald Bay malaza - iray amin'ireo tora-pasika malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Ireto misy hotely lamaody any amin'ny firenena.
Penang. Tandremo ny fitsidihana iray amin'ireo moron-dranomasin'ny nosy. Ireo toerana ireo dia antsoina hoe perla tsy misy dikany, satria ny firaisana amin'ny fasika madio sy ranom-boasary dia mamorona fiaraha-miombon'antoka. Amin'ny ankapobeny, ireo mpizahatany dia mandeha mankany amin'ny fialan-tsasatra tsy hay hadinoina.
Tontolon'ny borneo . Maro ireo mpizahatany milaza fa ny fialantsasatra any Borneo no tsara indrindra any Malezia. Eto dia hahita fasika sandandy, nosy coral sy ny ahi-maitso manodidina. Tsarovy fa maro ny hotely tsy manana ny tora-pasika manokana, saingy tsy misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny fialantsasatra izany.
Langkawi . Ho an'ireo tia mandainga amin'ny fasika fotsy, ny tsara indrindra any Malezia dia ho andro fialan-tsasatra any amin'ireo nosin'ny vondronosy. Any amin'ny faritra atsimo andrefana no misy ny moron-dranomandry indrindra sy tsara indrindra antsoina hoe Chenang . Toerana ho an'ny tanora izany, misy café samy hafa sy discos, ny fiainana andavanandro no fanalahidy. Ho fampiononana, eo amin'ny fanompoana anao eo amin'ny 2 km amin'ny fasika madio fotsy sy trano maro be amin'ny kitapo.
Kuala Lumpur , renivohitr'i Malezia, dia tsy manolotra fialantsasatry ny torapasika amin'ny vahiny, fa avy any dia afaka mankany Langkawi na Penang. Na izany aza, maro ny mandany fotoana eny an-dalana, hany ka ireo izay handeha hitsidika ny firenena fotsiny mba hialana amin'ny fasika sy any amin'ny rano mangatsiaka, tsara kokoa ny mipetraka ao an-drenivohitra, fa tsy any an-drenivohitra.
Malezia no fotoana tsara indrindra
Noho izany, nanapa-kevitra izahay teny amoron-dranomasina. Fotoana izao hahitana raha tsara kokoa ny miala sasatra any Malezia, ary koa manomana programa fialamboly:
Ny fotoan'ny orana. Raha ny tena izy dia maharitra mandritra ny taona ny fotoanan'ny tora-pasika any Malezia, amin'ny fotoana iray monja dia tsara kokoa ny miala sasatra any atsinanan'ny firenena, ary amin'ny iray hafa - any andrefana. Ny vanim-potoanan'ny orana any Malezia amin'ny morontsiraka atsinanana dia maharitra hatramin'ny Janoary hatramin'ny fiandohan'ny lohataona. Eo amin'ny tandrefana amin'izao fotoana izao dia maina sy mafana. Ny fialan-tsasatry ny Beach any Malezia amin'ny Mey, Jona, Jolay, Aogositra ary ny voalohandohan'ny volana septambra no tsara indrindra amin'ny tapany atsinanana, izay any amin'izao fotoana izao dia mazava sy mazava, raha mbola manomboka ny orana any andrefana. Tsara homarihina fa ny tandrefana dia somary mafimafy kokoa amin'ny vanim-potoanan'ny orana, ary tsy misy oram-be.
Fomba fanao amin'ny fialam-boly any Malezia. Tafiditra ao anatin'izany ny hafanana sy ny haavonavona avo indrindra amin'ny vanim-potoana maina. Ny fialan-tsasatra any Malezia amin'ny faran'ny volana Novambra, Desambra, Janoary ary Febroary dia mety kokoa ho an'ireo tsy manaiky ny hafanana, satria amin'izao fotoana izao, ny mari-pana amin'ny rivotra matetika dia mianjera amin'ny marika +27 ... + 29 ° C, fa amin'ny fotoana sisa dia matetika eny amin'ny faritra + 33 ° C, ary na dia avo aza. Noho izany, ny fialantsasatra any andrefan'i Malezia dia mandany tsara indrindra amin'ny fiandohan'ny ririnina, ary any atsinanan'i Malezia, ny faran'ny andro fialan-tsasatra dia hatramin'ny faran'ny volana hatramin'ny faran'ny volana septambra.
Karazana fialan-tsasatra amin'ny ankizy
Ny fialana amin'ny ankizy dia tsy misy afa-tsy ny fahatsapana tsara, mialoha, eritrereto ireto hevitra manaraka ireto:
Aiza no handoavana? Ny fianakaviana miaraka amin'ireo ankizy dia tokony handefa ny toeram-ponenan'ny Borneo. Tena tsara ny tanàna sy ny torapasika, ary ny ankizy dia misy fitsangatsanganana sy fialamboly mahafinaritra. Saingy ireo izay nanapa-kevitra ny haka aina any amin'ireo nosin'i Pangkor sy Langkawi dia tsy maintsy mandeha any am-paha-tsindrimandry any Singapour , satria tsy misy ny nosy fialam-boly ho an'ny ankizy.
Rahoviana? Ny ray aman-dreny tokony hifantohana dia ny foto-tsakafo ao amin'io faritra misy an'i Malezia izay hialany sasatra. Ohatra, amin'ny Langkawi dia maharitra hatramin'ny Novambra ka hatramin'ny Febroary. Na dia izany aza dia misy trondro maromaro maromaro avy any amoron-tsiraka no tsy misy afa-tsy aorian'izay noho ny fisotroana be loatra, fa ireo fianakaviana miaraka amin'ny ankizy kosa dia tokony mifidy ny fotoana sy ny toeram-pitsaharana mba tsy hisian'ny risika.
Anisan'ireo fialam-boly hafa ao amin'ny firenena ireto manaraka ireto:
Toerana fizahan-tany. Ireo mpizahantany mpandihy dia manome tolotra manokana ho an'ny zaridaina malaza Maleziana. Izany fahalalana izany dia nahasarika mpizaha tany bebe kokoa ho any amin'ny firenena. Ary koa, ny fanjakana dia mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny ekotourisme.
Speleology. Malezia koa dia malaza amin'ny mpankafy ny fampisehoana tantara an-tsehatra - eto dia afaka mitsidika zohy maro ianao, na "ennobled", ary "wild" ary tsy zatra mianatra.
Fitsaboana ara-pitsaboana Ny governemanta dia liana amin'ny fampandrosoana ity karazana fizahan-tany ity. Ny hôpitaly tsy miankina rehetra, izay handray ny toerany amin'ny sehatra vaovao ary afaka manolotra asa ho an'ny vahiny, dia hahazo tombon-dahiny. Antenaina fa amin'ny 2020, ny isan'ny vahiny ao amin'ny firenena izay tonga amin'ny fitsaboana dia mihoatra ny 1.5 tapitrisa. Ny fitsidihana ara-pahasalamana dia tsy azo lazaina hoe fitsaharana ara-klasika, saingy tsy azo atao ny manonona azy io ato amin'ity lahatsoratra ity.
Event tourism. Ireo izay misafidy fialan-tsasatra any Malezia amin'ny volana febroary dia hanana fahafahana hahita ny fijery mahatalanjona mamirapiratra ny fankalazana ny Taombaovao amin'ny kalandrie Shinoa. Voamarik'io fa malalaka be sy lehibe tahaka ny any Shina, saingy mbola misy tsy mitovy, satria ny lokan'ny firenena no manamarika ny fankalazana.
Indonezia - Fiarovana
Reniranon'i Korea Atsimo
Nepal - zava-misy mahaliana
Sakafo nasionalin'i Japana
Cristiano Ronaldo sy Georgina Rodriguez dia naneho ny endriky ny zanakavavy vao teraka
Inona no nofinofin'ny labiera?
Sary hosodoko voa
Strabismus amin'ny zaza
Ahoana ny fomba mahomby amin'ny kebab shish?
Rahoviana ny manapaka ny zaridaina amin'ny ririnina?
Fandravana tsy azo ialana: olo-malaza izay tsy tonga tamin'ny 2016
25 mahavariana mahatalanjona manerana izao tontolo izao
Ahoana no hahatratrarana ny vavony?
Santiago de Chile - mpizaha zava-mahadomelina
Placenta eo amin'ny rindrina anoloana
Kitay ho an'ny trano fonenana vita amin'ny raozy
Ashley Graham tao anaty sarimihetsika sary teny an-dàlambe tany New York: nampiseho ny tsy fahatanterahany ny modely
Fivarotana trano fivarotana amin'ny fomba malaza sy maoderina
Noho ny fitsaboana ny tenda mandritra ny fitondrana vohoka?
Stylish and successful
Inona no famantarana ny zodiazy?
Bozbash - fomba mahazatra momba ny lovia Caucasiana nentim-paharazana